Chirming Dhejis - Joornaalka Naqshadeynta
Dhejis Markii Sook uu yaraa, waxay aragtay shimbiro quruxsan oo buurta ku taal laakiin shimbirihii ayaa dhaqso u cararay, oo cod kaliya ka dambeeya. Waxay kor u eegtay cirka si ay u hesho shimbirta, laakiin waxa kaliya ee ay ku arki karto waxay ahayd laamo geedo iyo kaynta. Shimbirtu way sii waday heesaheeda, laakiin wax fikrad ah kama haysan halka ay joogtay. Laga soo bilaabo aad u yar, shimbirtu waxay ahayd laamaha geedka iyo kaynta weyn ee iyada. Khibradani waxay ka dhigtay iyada inay ku aragto codka shimbiraha sida duurka. Sanqadha shimbiraha waxay dejisaa maskaxda iyo jirka. Tani waxay qaadatay dareenkeeda, waxayna ku biirtay tan tan mandala, oo aragti ahaan mataleysa bogsiinta iyo ka fiirsashada.
Magaca mashruuca : Chirming, Magaca naqshadeeyayaasha : Sook Ko, Magaca macmiilka : Sejong University.
Dhejis Sook Ko Chirming